Nhanganyaya kuRFID yekuwacha matgi
Machira ekuwachisa anogadzirwa neyakagadzikana uye ari nyore ePPS zvinhu. Ichi chinhu chakakwirira-kuomarara crystalline nebwe ouinjiniya mapurasitiki pamwe akatsiga mamiriro. Iine zvakanakira yakakwira tembiricha kuramba, yakanaka kuputira mashandiro, kemikari kuramba, isiri-huturu, murazvo kudzora uye zvimwe zvakanaka. zvinowanzoshandiswa.
Yapfuura RFID yekuwacha matagi aiwanzo kugadzirwa nesilicone zvinhu, inozivikanwawo seRFID silicone yekuwacha matagi. Gare gare, nekuda kwematambudziko emhando yesilicone yekuwachira chitambi, hongu, hazvisi kuti pane dambudziko remhando mukugadzirwa, asi iyo silicone yekuwachira chitambi pachayo ichave nekudonha kwakakomba panguva yekushandiswa, uye iyo yekumhanyisa kumhanyisa inononoka kusiya kugadzirwa. Parizvino, yekuwachira chitaridzi kunoitwa neyakagadzikana uye yakapusa PPS zvinhu. Ichi chinyorwa chakarongeka chakasimba-kuomarara sekristaro resini ouinjiniya epurasitiki, iyo ine zvakanakira yakakwira tembiricha kuramba, yakanaka kuputira kuita, kemikari kuramba, isiri-chepfu, murazvo unodzora, nezvimwe zvichishandiswa zvakanyanya.
RFID yekuwacha tag yekushandisa renji
Inoshandiswa munzvimbo dzakapisa-tembiricha senge yekuwachisa mbichana kuzivikanwa. Iine hunhu hwemvura isina mvura, isina guruva, inorwisa-ngura, yakakwira / yakadzika tembiricha yekudzivirira, nezvimwewo. Haisi chete yakakwana mukushambidza mbichana, asi zvakare inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji dzakashomeka dzemaindasitiri maitiro ekudzora masystem uye otomatiki manejimendi. "," Pressure-resistant "," heat-resistant "," alkali-resistant lotion "uye zvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa, kuve nechokwadi chekushandiswa kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzezvakatipoteredza, iko kwakanyanya kukwirira kunogona kuvimbisa anopfuura mazana maviri macircuit ekuwacha. Kune akawanda akawanda emagetsi marezheni ekushandisa senge mota injini yekuchengetedza kuzivikanwa, kemikari mbishi zvinhu zvekutevera zvichingodaro.
RFID yekuwacha tag inoshandisa nharaunda
RFID machira ekuwachisa anogona kushandiswa mune akaomarara uye akasimba michina zvigadzirwa; zvigadzirwa zvemagetsi zvinoda kupisa kupisa uye murazvo kuramba; uye zvakare mune zvigadzirwa zvemakemikari zvinoda kuramba ngura. Kunyanya pasi pemamiriro ekushisa kwakanyanya, kwakanyanya mwando uye kwakanyanya frequency, ichine yakanakisa magetsi emagetsi. Iyo yekushandisa modhi inogona kuiswa munzvimbo dzakashata nharaunda tembiricha yakakwira, yakanyanya mwando, kupfeka kuramba uye ngura kuramba.